Famahana ny olana ara-bary-HAMORAINA NY FAHAZOANA MASOMBOLY -
AccueilRaharaham-pirenenaFamahana ny olana ara-bary-HAMORAINA NY FAHAZOANA MASOMBOLY
08/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hiaraha-mahita ny olana eo amin’ny famokarana vary vokatry ny fiovaovan’ny toetry ny andro amin’ny ankapobeny. Tsy fahampian’ny rano, tsy zarizary ny voka-bary miakatra izay mahatonga ny olana mitranga ankehitriny. Manoloana ny toe-draharaha dia tsy miraviravy tanana ireo tompon’andraikitra mpanatanteraka avy amin’ny minisitera misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Foto-tsakafon’ny Malagasy ny vary ka hilana tetikady ny fiatrehana ny sehatry ny famokarana. Misy ny fanapariahana masomboly voafantina izay mamokatra ao anatin’ny fotoana fohy, ahafahana mamonjy ny fahasimbana nateraky ny fiovaovan’ny toetry ny andro ka mahakely ireo voka-bary miakatra. Tsy miova ihany koa ny fanamby apetraky ny minisitera, ho amin’ny fahavitan-tena ara-bary afaka 3 taona na dia eo àry ny olana eo amin’ny famatsiana ara-bary vokatry ny tsy fahampian’ny orana. Mitondra fanazavana mahakasika ireo tetikasa hampiharina entina hanatanterahana izany ny Ministry ny Fambolena sy ny fiompiana, Rivo Rakotovao.
Triatra (TR): Misedra olana goavana isika ankehitriny eo amin’ny tsy fahampian’ny vary vokatry ny tsy fahampian’ny orana, Inona no tetikady ho ampiasain’ny minisitera misahana ny fambolena entina hiatrahana ny olana?
Minisitry ny Fambolena, Rivo Rakotovao (RR): Mbola mamboly avokoa ireo tantsaha ankehitriny, tsy maintsy misy ny fanitsiana tsikelikely atao eo amin’ny fambolena. Raha toa ka tsy ampy kosa ny vokatra amin’ny volana Jona dia tsy maintsy mijery izay fepetra hiatrehana ny olana ny fanjakana. Misy ny fanapariahana masomboly izay afaka mamokatra ao anatin’ny fotoana fohy kokoa. Tsy afaky ny hianki-doha amin’ny Makaolika isika satria ela dia ela ny famokarana azy ireny. Manome fanamorana ny tantsaha ihany koa ny fitondram-panjakana eo amin’ny vidin’ny masomboly. Ny masomboly no antoka lehibe hampanjary ny sehatry ny fambolena. Manao ezaka goavana ny fanjakana ary manampy ny ireo tantsaha araka izay azo atao ahazoana vokatra mifanaraka amin’ny filana.
TR: Aiza ho aiza kosa ny fampiharana ny tetikasa izay novolavolaina miaraka amin’ny Jica, izay entina hampiakarana ny taha-pamokarana?
RR: Ireny indrindra no hampirisihana ny mpamboly ankehitriny. Hampirisihina izy ireo mba hampiasa ireo masomboly voafantina. Tanjona ny ahazoana vokatra masaka ao anatin’ny fotoana fohy kokoa. Raha hiandry ny fambolena Makaolika mantsy isika dia hihena be ny vokatra ary fatiantoka no ho jinjaina. Hanaparitaka ireo masomboly voafantina manerana ny nosy izahay. Ka na dia eo àry ny fahataran’ny orana sy ny tsy fahampian’ny fotoana hilatsahany dia tsy maintsy misy ny tosika amin’ny alalan’ny zezika sy ireo masomboly ary ny fomba famokarana mba hampitomboana ny vokatra miakatra.
TR: Ahoana ny mahakasika ny “Agro Ecologie” izay tetikadim-pambolena mifanaraka amin’ny toetry ny andro?
RR: Tetikady maharitra ny fampiasana ny “Agro Ecologie” , miatrika ny fiovaovan’ny toetry ny andro. Mandresy lahatra ireo tantsaha mpamokatra ireo manam-pahaizana mba hampiasa ireo teknika manoloana izany. Miova ny manodidina, ady mafy no atrehina manoloana izany fiovaovan’ny toetry ny andro izany. Ny voly rakotra no ahafahana misitraka vokatra tsara, sy ahafahana mampidi-bola ihany koa eo amin’ny sehatr’izay famokarana izay. Misy ny tetikasa hiarahana amin’ny firenena Japonnais, hampirisihana ireo tantsaha mba hanova ny fomba fambolena mba ahazoana vokatra tsara sy betsaka kokoa. Mila mitsitsy rano isika eo amin’ny sehatry ny fambolena, miankina amin’ny faritra tsirairay no hijerena ny fahafahana mamboly. Hampiharina ireo teknika maro samihafa, miankina amin’ny filan’ny tany, izay no asan’ireo teknisiana. Misy ihany koa ny fametrahana tohodrano maro entina hanatsarana ny sehatry ny fambolena izay. Omena tosika hatrany ireo faritra mbola afaka mamboly sy afaka mampitombo vokatra.
TR: Manao ahoana kosa ny mahakasika ny fampiofanana sy fanomezana teknika ireo tantsaha?
RR: Mitohy foana ny fampiofanana hifotony ireo tantsaha. Hampirisihina ihany koa ireo tanora havanam-pianarana mba hiverina any amin’ny toerana nisy azy hitrandraka ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Maro ireo tantsaha any ambanivohitra no matahotra manoloana ny fanovana ny teknika. Mila ohatra mivaingana kosa izy ireo ahafahany mitondra fanovana eo amin’ny fomba famokarany efa nahazatra azy hatrizay. Manampy azy ireny ny teknisianina eo amin’ny teknikam-pambolena, ary ny fomba fampiasana ireo masomboly.
TR: Ho tratra kosa ve ny fanamby nokasaina ho amin’ny fahavitan-tena ara-bary afaka 3 taona?
RR: Tsy miova ny fanamby napetraka eo amin’ny famokarana vary. Mety misy ny fiovana raha sanatria mitohy ny haintany. Manana rafitra mazava ho amin’ny fanavaozana sy fanamafisana orina amin’izay tsy ampy hatrany kosa ny minisitera. Andraikitry ny fanjakana ny mitady vahaolana, saingy tsy miova ny fanamby ho amin’ny fikatsahana ny fahavitan-tena ara-bary afaka 3 taona. Efa nanomboka tamin’ny taona 2016 ny tetikasa, amin’ny taona ho avy kosa no ho jinjaina ny vokatra avy amin’izany. Manomana hatrany isika mba hanatrarana ny fanamby napetraka , n’inon’inona mitranga dia tsy miandry ireo masomboly tsy mamokatra isika fa mitady vahaolana hatrany. Tsy miankina amin’ireo vonjy tavan’andro isika fa mandray andraikitra manoloana ny olana. Ao ireo masomboly, ny zezika ary ny rano izay kajiana miaraka ahafahana mahazo vokatra tsara.
Vahoaka an’alin-kisa hatrany no nanototra ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fitetezana ny faritra Vatovavy Fitovinany mitondra ny « vinan’ny fisandratana ». Vohipeno izay tanàna tsy vaovao amin’ ny filoha ankehitriny, satria raha tsiahivina ...Tohiny